Swades (2004) | MM Movie Store
Bollywood ဇာတျကား တှထေဲမှာ Swades (We, the People) ဆိုတဲ့ဇာတျကား မကွညျ့ရသေးသူတှအေတှကျ မိတျဆကျပေးခငျြသဗြ။
ဒီဇာတျကားက Entertainment ထကျပိုတဲ့ သကျရောကျမှုရှိခဲ့တာ တဈကွောငျး၊ တိုငျးပွညျတဈပွညျရဲ့ စီးပှားရေးမှာ ကွီးမားတဲ့ အလှညျ့အပွောငျးဖွဈလာအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာက တဈကွောငျး၊ ဇာတျကား တဈလြှောကျလုံး တကယျ့ သရုပျမှနျ ရိုကျထားတာကလညျး ထူးခွားတယျဗြ။
Swades ကို တိုကျရိုကျဘာသာပွနျရရငျတော့ “အမိတိုငျးပွညျ” ပေါ့ဗြာ။ ကဲ “အမိတိုငျးပွညျ” လို့ဆိုရငျ နိုငျငံခွားကိစ်စပါလာမယျ။ အဲ.. နိုငျငံခွားကိစ်စပွောရငျ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျမှု(migration) အကွောငျး ပါပွီ၊ အဲဒီ (migration) ဆိုတာကွီးကို မှေးထုတျပေးလိုကျတဲ့ လကျသညျတှကေ အမြားကွီးကိုး…
အဲ (migration) ကွောငျ့ဘာဖွဈလာသလဲ အဖွကေ ဦးနှောကျယိုစီးမှု (Brain Drain) ပေါ့ဗြာ ….ကဲ ဦးနှောကျယိုစီးမှု ဖွဈရငျ အဓိက နဈနာတာက “အမိတိုငျးပွညျ” ပေါ့ဗြာ ပွောစရာမှ မဟုတျတာနော့။
ဘယျလိုနဈနာလညျး? ဘာညာတှေ ထားလိုကျတော့ အဲဒီ Brain Drain ရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ စကားလုံး Brain Gain လညျး ခငျဗြား သိပွီးသား ဒါပမေယျ့ Brain Gain ဖွဈစဉျက ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲ အရာကိုး။
အဲ.. အဲဒီ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲ့ အရာကို သောကျသောကျလဲဖွဈလာအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တာက ဇာတျကားတဈကား ဆိုရငျ ခငျဗြား ယုံခငျြမှ ယုံတော့မယျ…။
ဒါပမေယျ့ ဒါက တကယျ့လကျတှေ… ဖွဈတာတာမှ ပွညျတျောပွနျတှအေတှကျ လကျခံကွိုဆိုရေး၊ နရေပျမှာ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဘာညာကို စခနျးတှေ ဘာတှေ အသအေခြာ ဖှငျ့ပွီးကိုး လုပျခဲ့ရတဲ့အထိပဲ…။ အဝေးကွီးလညျး မဟုတျဘူး India မှာ ဖွဈခဲ့တာ… ဘယျဇာတျကားလညျးတော့ ခငျဗြား မေးမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒီစာကို စဖတျလာကတညျးက ဇာတျကား နာမညျထညျ့ရေးပွီး မိတျဆကျပေးထားတာကိုး။အဲ ဇာတျလမျး အခငျးအကငျြး အကွမျးဖငျြးလေးတော့ ပွောအုံးမှNASA ရဲ့ ဂွိုတျတုလှတျတငျရေး သုတတေနဌာန တခု(Global Precipitation Measurement project အတှငျးက မွငျကှငျးနဲ့ စတယျဗြာ…
(အဲဒီ ဇာတျကားထဲပါတယျဆိုတဲ့ NASA မွငျကှငျးက အမှနျတကယျ NASA မှာရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ ပွီးတော့ အဲဒီ (Global Precipitation Measurement project)ဆိုတာကလညျး အပွငျမှာ တကယျ့အမှနျပဲ အခုဆို လကျတှေ့ အကောငျအထညျ ဖျေါပွီးသှားပွီပေါ့ဗြာ)
အမရေိကား ပညာသှားသငျပွီး NASA မှာ အလုပျရတဲ့ မိုဟမျး(Mohan) ဆိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျက သူ့မိဘတှဆေုံးခဲ့တဲ့ နှဈပတျလညျနကေို့ အမှတျရရငျးနဲ့ ငယျစဉျက သူ့ကိုကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျခဲ့ အဒျေါကွီး(Kaveriamma) ကို သတိရလာတာကနေ အလုပျက ခှငျ့တောငျးပွီး နရေပျ ဒလေီကို ပွနျသှားတယျ။
အဲဒီရောကျတော့ အမယျအိုက စောငျ့ရှောကျမယျ့သူမရှိလို့ ဘိုးဘှားရိပျသာ ရောကျသှားတယျ သိရတော့ လိုကျစုံစမျးတယျ။ဘိုးဘှားရိပျသာကနေ ရှာတဈရှာက အခမဲ့ကိုယျပိုငျကြောငျး ဆရာမတဈယောကျ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျဖို့ ချေါသှားတာ သိရတော့ မရရတဲ့နညျးနဲ့ အဲသညျရှာလိပျစာမေးပွီး လိုကျရှာတယျ…
အဲသညျမှာ… ကြေးလကျမွငျကှငျး၊ ဆငျးရဲကပျြတညျးတဲ့ လယျသမားတှရေဲ့ဘဝ၊ ရရေောငျးစားနတေဲ့ ကြောငျးနေ ကလေးငယျတှရေဲ့မွငျကှငျး အစုံပေါ့ဗြာ အသအေခြာ ပွပါတယျ။
အဲဒီမှာ… ပွောတာဆိုတာ ငွငျးတာလေးတှကေ သမားရိုးကြ စကားတှတေော့ မဟုတျတော့ဘူး
Bollywood ဇာတ်ကား တွေထဲမှာ Swades (We, the People) ဆိုတဲ့ဇာတ်ကား မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးချင်သဗျ။
ဒီဇာတ်ကားက Entertainment ထက်ပိုတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာ တစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးမှာ ကြီးမားတဲ့ အလှည့်အပြောင်းဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာက တစ်ကြောင်း၊ ဇာတ်ကား တစ်လျှောက်လုံး တကယ့် သရုပ်မှန် ရိုက်ထားတာကလည်း ထူးခြားတယ်ဗျ။
Swades ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ “အမိတိုင်းပြည်” ပေါ့ဗျာ။ ကဲ “အမိတိုင်းပြည်” လို့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကိစ္စပါလာမယ်။ အဲ.. နိုင်ငံခြားကိစ္စပြောရင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှု(migration) အကြောင်း ပါပြီ၊ အဲဒီ (migration) ဆိုတာကြီးကို မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ လက်သည်တွေက အများကြီးကိုး…
အဲ (migration) ကြောင့်ဘာဖြစ်လာသလဲ အဖြေက ဦးနှောက်ယိုစီးမှု (Brain Drain) ပေါ့ဗျာ ….ကဲ ဦးနှောက်ယိုစီးမှု ဖြစ်ရင် အဓိက နစ်နာတာက “အမိတိုင်းပြည်” ပေါ့ဗျာ ပြောစရာမှ မဟုတ်တာနော့။
ဘယ်လိုနစ်နာလည်း? ဘာညာတွေ ထားလိုက်တော့ အဲဒီ Brain Drain ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် စကားလုံး Brain Gain လည်း ခင်ဗျား သိပြီးသား ဒါပေမယ့် Brain Gain ဖြစ်စဉ်က ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အရာကိုး။
အဲ.. အဲဒီ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ အရာကို သောက်သောက်လဲဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာက ဇာတ်ကားတစ်ကား ဆိုရင် ခင်ဗျား ယုံချင်မှ ယုံတော့မယ်…။
ဒါပေမယ့် ဒါက တကယ့်လက်တွေ… ဖြစ်တာတာမှ ပြည်တော်ပြန်တွေအတွက် လက်ခံကြိုဆိုရေး၊ နေရပ်မှာ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဘာညာကို စခန်းတွေ ဘာတွေ အသေအချာ ဖွင့်ပြီးကိုး လုပ်ခဲ့ရတဲ့အထိပဲ…။ အဝေးကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး India မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ… ဘယ်ဇာတ်ကားလည်းတော့ ခင်ဗျား မေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီစာကို စဖတ်လာကတည်းက ဇာတ်ကား နာမည်ထည့်ရေးပြီး မိတ်ဆက်ပေးထားတာကိုး။အဲ ဇာတ်လမ်း အခင်းအကျင်း အကြမ်းဖျင်းလေးတော့ ပြောအုံးမှNASA ရဲ့ ဂြိုတ်တုလွှတ်တင်ရေး သုတေတနဌာန တခု(Global Precipitation Measurement project အတွင်းက မြင်ကွင်းနဲ့ စတယ်ဗျာ…
(အဲဒီ ဇာတ်ကားထဲပါတယ်ဆိုတဲ့ NASA မြင်ကွင်းက အမှန်တကယ် NASA မှာရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ (Global Precipitation Measurement project)ဆိုတာကလည်း အပြင်မှာ တကယ့်အမှန်ပဲ အခုဆို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာ)
အမေရိကား ပညာသွားသင်ပြီး NASA မှာ အလုပ်ရတဲ့ မိုဟမ်း(Mohan) ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သူ့မိဘတွေဆုံးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို အမှတ်ရရင်းနဲ့ ငယ်စဉ်က သူ့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ အဒေါ်ကြီး(Kaveriamma) ကို သတိရလာတာကနေ အလုပ်က ခွင့်တောင်းပြီး နေရပ် ဒေလီကို ပြန်သွားတယ်။
အဲဒီရောက်တော့ အမယ်အိုက စောင့်ရှောက်မယ့်သူမရှိလို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ရောက်သွားတယ် သိရတော့ လိုက်စုံစမ်းတယ်။ဘိုးဘွားရိပ်သာကနေ ရွာတစ်ရွာက အခမဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဆရာမတစ်ယောက် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ ခေါ်သွားတာ သိရတော့ မရရတဲ့နည်းနဲ့ အဲသည်ရွာလိပ်စာမေးပြီး လိုက်ရှာတယ်…
အဲသည်မှာ… ကျေးလက်မြင်ကွင်း၊ ဆင်းရဲကျပ်တည်းတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝ၊ ရေရောင်းစားနေတဲ့ ကျောင်းနေ ကလေးငယ်တွေရဲ့မြင်ကွင်း အစုံပေါ့ဗျာ အသေအချာ ပြပါတယ်။
အဲဒီမှာ… ပြောတာဆိုတာ ငြင်းတာလေးတွေက သမားရိုးကျ စကားတွေတော့ မဟုတ်တော့ဘူး